ज्योतिष शास्त्र : कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /Intresting/ज्योतिष शास्त्र : कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
ज्योतिष शास्त्रीहरुले मानिसको जन्म समयलाई आधार मानेर उसको भूत, भविष्य र वर्तमानका विषयमा फलादेश गर्छन् ।
शास्त्रलाई आधार मानिर गरिने यस्ता फलादेशमा कतिपयले विश्वास मान्छन् भने कतिपयले विश्वान नलाग्ने बताए पनि चिना हेराउने, हात हेराउने, दैनिक राशिफल हेर्न भने पछि परेका हुँदैनन् ।
आज हामीले जन्मेको महिना अनुसार महिलाको स्वभाव पनि निर्धारण हुने ज्योतिषीय फलादेश केही प्रस्तुत गरेका छौं ।
राती सुतेर मोबाइल चलाउनुहुन्छ?चाडै नै पछुताउने हुनेछ